Mitsangana dia mitondra fizika fizika amin'ny sehatra hafa hiarovanao ny balaonina | Androidsis
Lalao mitsangana ary mahaliana izay tsy maintsy hiarovanao ny balaonina tianao indrindra amin'ny vidiny rehetra. Lalao Android izay mifototra amin'ny fizika ny zavatra hamoronana ambaratonga tena izy sy mahafinaritra amin'ny alàlan'ny fahitana ny fomba rehetra hanandramanao hamono ny balonanao.
Mitsangàna amin'izao harena izao hevitra mihoatra ny antsasaky ny tapitrisa ao amin'ny Google Play Store, ka mety efa naheno an'izany ianao taloha. Izahay dia tsy te hamela azy hamaky an'ireto tsipika ireto hanehoana fa ny fizika zava-misy dia fitrandrahana tsara hitady mekanika lalao hafa, satria mitranga amin'ny Rise Up.
1 Mba hiarovana ny balaonina dia voalaza!
2 Mitsangàna mba hitondra ny balaonina eny amin'ny lanitra
3 Freemium miaraka amin'ny doka
Mba hiarovana ny balaonina dia voalaza!
Ny Rise Up dia mametraka antsika eo alohan'ny balaonina izay miakatra manakatra ny lanitra ary hiatrika ireo karazan-javatra rehetra izay hanandrana hanindrona azy hamarana ny fiainany plastika mahantra. Araka izany, Serkan Ozyilmaz te-hanantona anay hankafizanao ny lalao iray tany am-boalohany izay mandray ny fizika ny zavatra ho toy ny manda fiarovana lehibe.
Ity fizika zavatra ity dia miseho miaraka amin'ny fiarovana tokana ananantsika: ampinga ahafahantsika mihetsika haingana miaraka amin'ny rantsan-tànantsika eo amin'ny efijery. Ity ampinga ity dia ho afaka manosika, manipy ny sisiny na handrovitra andalana sakana iray manontolo, amin'izay, amin'ny fifandonana amin'ireo zavatra sasany mifanohitra, ny làlana mankany an-danitra dia manohy ny fahasambaran'ny balaonina tiantsika indrindra.
Ny fizika fizarana dia ho afaka miteraka toe-javatra arivo tsy mitovy amin'ny famelezantsika ireo zavatra amin'ny ampinga mahery. Na miaraka amin'ireo orana tsy miato amin'ny zavatra izay hanery antsika hamindra ny ampinga amin'ny lafiny iray mankany amin'ny iray hafa hanipy azy ireo amin'ny sisiny. Lalao izay manolotra ny hakingana sy ny hafainganan'ny eritreritra mba haka sary an-tsaina ny làlana izay harahin'ireo endrika geometrika voasoratra eo amin'ny efijery.
Mitsangàna mba hitondra ny balaonina eny amin'ny lanitra
Amin'ity lalao mekanika ity dia hanana fanamby isika amin'ny lalao video antsoina hoe Mitsangàna. Ny zavatra mahaliana momba ireo fanamby atrehin'ity lohateny ity dia mety ho mora kokoa noho ny maody tsy manam-petra aza izy ireo. Izany hoe, manana isika fomba lalao isan-karazany mba hanana fotoana mahafinaritra amin'ny lalao manana toetra tsara manaitra, na dia tena ao anatin'ny "fototra" na "fototra" aza izany.
Ny tsara indrindra amin'ny rehetra dia ny singa geometrika sy rafitra lehibe ho tonga amintsika izany, ary mila mihetsika amin'ny fihetsika mahery setra isika ao anatin'ny fotoana fohy, haka hery ampy hanipazana azy ireo amin'ny lafiny iray. Na tsy maintsy manana fahatsapana ampy ihany koa isika hitarihana azy ireo kely, satria izy ireo dia mety hiteraka fikorontanana tsy ampoizina izay manelingelina ny iraka ataontsika hamonjy ny tany.
Noho izany, miatrika isika lalao milay kely izay tsy misy tsy fahampian'ny atiny hamoha. Farafaharatsiny amin'ny karazana balaonina isan-karazany miaraka amin'ireo hoditra ireo ary mety ho tanjona iray tratrarina.
Freemium miaraka amin'ny doka
Ao amin'ny Rise Up dia efa afaka zatra manao doka ianao. Hanana izany ianao ny fomba azo antoka hijerena doka mba hananana fiainana indray ary hitohizan'ny toerana nanefena ny balonay. Izy io dia iray amin'ireo kileman-tarehin'ny lohateny iray izay nahavita nifanaraka tamin'ny filan'ny olona an-tapitrisany izay nanokana fotoana hanaovana famerenana, na amin'ny hevitra na amin'ny kintana tsotra.
Raha ara-teknika, Rise Up dia manolotra toetra tsara sasany toy ny fizika zavatra tsara tantana ary izany tokoa no fanahin'ny lalao. Ny ambiny dia fanampiny, satria ny toerana tsy maintsy nihinanany ny voanio kely dia ny fivezivezena zavatra am-polony maro tokoa araka izay azo atao.
Mitsangàna, manana izany maimaim-poana ianao ao amin'ny Play Store ka manandrana miaro balaonina te-hiakatra amin'ny lanitra ianao, raha mbola manampy azy hisoroka ireo zavatra an'arivony maro ho tonga eo aminy ianao.
Ny fizika ataonao
Haavo an'arivony no miandry anao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Arovy ny balaonina tianao indrindra amin'ny vidiny rehetra amin'ny Rise up